Akanjo mahazatra Jalisco, toetra mampiavaka ny Meksikana | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 12/05/2021 09:19 | kolontsaina, México
Ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco dia misy fitoviana betsaka amin'ny akanjo mahazatra an'ny ny mariachis, ka hatramin'ny fisafotofotoana matetika. Raha ny marina dia inoana fa ity farany dia teraka tao amin'ny tanànan'i Jalisco Cocula. Na izany aza, tsy mitovy tanteraka izy ireo. Ny faharoa amin'izy ireo dia mampiditra bokotra amin'ny pataloha sy palitao, ankoatry ny fananana loko maro karazana.
Na izany aza, ny akanjo Jalisco mahazatra tena izy, izay hibodo an'ity lahatsoratra ity, dia maotina kokoa. Araka ny tondroin'ny anarany dia holazainay aminao ny momba ny fitafiana kilasin'ity fanjakana Mexico ity, izay any amin'ny faritra andrefan'ny firenena ary mifanila amin'ny an'i Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Colima, ary koa miaraka amin'ny Oseana Pasifika.
1 Famaritana ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco
1.1 Tantaran'ny fitoriana
1.2 Akanjo mahazatra Jalisco ho an'ny vehivavy
1.3 Akanjo Jalisco ho an'ny lehilahy
2 Rahoviana no ampiasaina ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco
2.1 Fetin'ny Charro
Famaritana ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco
Hanomboka amin'ny fanaovana tantara kely momba an'io akanjo io isika ary avy eo hifantoka amin'ny akanjo mahazatra lehilahy sy vehivavy. Samy hafa be izy ireo, betsaka miloko kokoa sy falifaly kokoa ny an'ny vavy.
Ny niandohan'ny palitao charro, izay, araka ny efa nohazavainao, dia ilay fomban-drazana avy any Jalisco, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mahagaga fa teraka ilay akanjo mampahafantatra an'i Mexico any ivelany, hoy ny nino azy, tany amin'ny tany Espaniôla, manokana ao Salamanca.
Araka ny fantatrao ihany, ny mponina amin'ity faritany ity dia antsoina, marina, charros. Ary, raha mijery ny fitafiany mahazatra izy ireo, dia marina fa mitovy amin'ny akanjo Jalisco izy ireo. Ny Espaniola dia misy pataloha mainty matanjaka, palitao fohy mitovy loko ary baoty mitaingina avo. Toy izany koa, ny satroka dia mitovy, na dia manana elatra kely kokoa aza.
Charros miaraka amin'ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco
Ity fitafiana ity dia mety ho lasa tany Amerika tamin'ny fahatongavan'ireo Hispanika ary horaisina ao amin'ny Faritra Jalisco. Na izany aza, nahazo fanovana maromaro izy io. Tao anatin'ireo taonjato manaraka dia nohatsaraina tamin'ny fanampiana amboradara sy firavaka vita tanana. Efa tao amin'ny XIX, io no nampiasain'ny chinacos, anarana nomena ny lehilahy niasa tany an-tsaha.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa ny amperora Maximilian an'ny Habsburg Mpankafy lehibe ny akanjo charro izy. Nampiasainy imbetsaka aza izy io nanandrana nifanaraka tamin'ny fireneny vaovao. Efa niaraka tamin'ny revolisiona Meksikana, nanjary nanjary nanjary io akanjo io akanjo meksikana quintessential, mihoatra ireo mahazatra an'ny faritra hafa ao amin'ny firenena (raha te hahalala bebe kokoa momba ity farany ianao, dia manoro hevitra anao izahay Ity lahatsoratra ity).
Na izany aza, tsy mitovy ny akanjo charro mahazatra rehetra amin'izao fotoana izao. Samy hafa izy ireo ny akanjo fiasana, akanjo feno ary akanjo feno, na dia zara aza misy fahasamihafana eo amin'izy ireo. Ilay iray ihany no mipetraka ny haitraitra amboradara sy firavaka izay nampidirin'izy ireo. Araka ny efa noeritreretinao azy, ny voalohany dia maotina kokoa noho ilay farany, na dia tsara tarehy sy manaitra aza izy rehetra.
Raha mitsidika an'i Guadalajara, renivohitra ary tanàna malaza indrindra ao amin'ny fanjakan'ny Jalisco ianao, dia tsy ho sarotra aminao ny hahita ny akanjo itanao. Raha ny lojika dia tsy mampiasa azy isan'andro ny mponiny fa mampiasa azy Manararaotra ny hetsika rehetra izy ireo mba hanaingoana azy. Saingy, tsy mila adim-potoana intsony, hiresaka aminao momba ny akanjo Jalisco mahazatra ho an'ny vehivavy izahay.
Akanjo mahazatra Jalisco ho an'ny vehivavy
Akanjo vehivavy mahazatra Jalisco
Ny vehivavy Jalisco dia manao akanjo tokana misy zipo lava. Namboarina tamin'ny poplin, avo ny tendany ary mavesatra ny tanany. Ary koa, amin'ny tapany ambony, amin'ny haavon'ny tratra, entiny izany baolina vitsivitsy miendrika vee izay mifanindry. Ary koa ny zipo dia somary malalaka.
Mikasika ny loko dia mazàna izy io feo tokana, na dia mifanohitra amin'ny falifaly aza izany kasety miloko fa manana ny mifanindry izy ary koa amin'ny dantelina itafiany ho firavaka. Raha ny kiraro dia vita amin'ny kofehy ary manana kojakoja samihafa. Farany, ny volon-doha amin'ny volo dia vita amin'ny ribbon mitovy amin'ny hita eo amin'ny akanjo.
Akanjo Jalisco ho an'ny lehilahy
Mikasika ny akanjo charro ho an'ny lehilahy, dia misy akanjon'akanjo ao amboniny, a palitao fohy. Tonga hatrany amin'ny tapany ambany amin'ny valan-tratra ary fohy ihany ny tanany mba hanehoana ny firavaka volafotsy ny saribakoly. Toy izany koa, azo haingoina izy io bokotra fitopolo mitovy feo, na dia mety ho volamena koa izy ireo.
Raha ny pataloha, dia tery izy ireo, suède na lamba ary tonony mainty. Izy ireo koa dia mitondra fehezo amin'ny tongotra rehetra. Ny akanjo dia mifameno amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy mitovy loko amin'ny akanjo.
Mila jerena manokana ny sombrero. Tany am-boalohany izy io dia natao hanoherana ny vokatry ny masoandro Jalisco ary koa ho fiarovana amin'ny fianjerana amin'ny soavaly. Noho io antony io dia namboarina tamin'ny volon-tratra izy ireo, volon'ondry na mololo varimbazaha ary nisy vato efatra na ribony tao anaty veran'izy ireo izay nitombo avo roa heny ka nahatonga azy mahatohitra kokoa.
Ny tampon'ity satroka mahazatra ity dia lehibe sy malalaka, ary koa antsoina hoe eo an-damosiny. Ary farany, dia voaravaka shawl na voaravaka peta-kofehy. Tena nilaina io famolavolana ho an'ny asa an-tsaha io ka nanjary mahazatra manerana an'i Mexico.
Ary farany, sombin-javatra hafa tsy azo hadinoina amin'ny endrika charro ny serape. Amin'ity tranga ity dia tsy akanjo io fa karazana lamba firakotra izay nentin'ireo mpitaingina sy ny lasely soavaliny. Noho izany, tsy ho hitanao izany rehefa manatrika dihy na matso an-tongotra ianao, fa ho hitanao izany raha ny momba ny pasiteran'ny mpitaingin-tsoavaly na ny fampisehoana charros fa hasehonay anao manaraka.
Rahoviana no ampiasaina ny akanjo mahazatra an'ny Jalisco
Raha ny marina, rehefa avy nanazava izahay hoe manao ahoana ny akanjo Jalisco ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, hifantoka amin'ny firesahana aminao momba ny hetsika sy fety izay mahazatra kokoa ny mahita olona mitafy azy.
Ny seho faran'izay tsara anaovan'ny akanjo ireo dia ny an'ny ny charrería. Ireo hetsika soavaly nentim-paharazana nentim-paharazana ao amin'ny firenena Aztec dia mahazo io anarana io. Izy ireo dia mivoatra amin'ny kianja antsoina hoe charva canvases ary izy ireo dia misy fa ny mpitaingin-tsoavaly dia manao fanazaran-tena samy hafa amin'ny lamosin'ny soavaliny.
Amin'ny maha-fanatanjahantena azy dia teraka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX mba hahatsiarovana ny asan'ny omby any an-tsaha izay nanjary lany andro. Ny charrería dia karakarain'ny federasiona ary ny fomban-drazany dia nekena ho Lova tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona avy amin'i UNESCO hitahiry azy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia mitana andraikitra lehibe amin'ny charrería koa ny vehivavy. Tsy hoe satria isan-taona dia voafidy ny iray mpanjakavavy izany no miandraikitra ny fitokanana ireo fety samihafa, nefa koa satria mandray anjara amin'ny fifaninanana mitaingina soavaly. Izy ireo dia Amazona izay mandray anjara, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny fifehezana fantatra amin'ny charra skirmish. Izy io dia misy vondrona misy Amazona valo izay manao choreografie ao an-damosin'ny soavaliny sy amin'ny gadona mozika.
Saingy, soa ihany fa mihamaro ny charra no ampirisihina hanao karazana fandaharana hafa. Anisan'ireo zava-dehibe indrindra, hotononinay ianao ny vodin-tsoavaly, ny mpitaingin-tsoavaly sy ny soavalivavy, ny piales eo ambony lamba, ny manganay an-tongotra na an-tsoavaly, ny lisitry ny fohy ao amin'ny peratra na ny dian'ny fahafatesana.
Raha ny lojika, amin'ireo tranga ireo, ny vehivavy dia manao karazana kojakoja hafa ho an'ny palitaony. Anisan'izany, baoty misy paingotra, satroka ary mpiasa. Ho fanampin'izay, apetrak'izy ireo eo ambonin'ilay soavaly ilay tendrombohitra antsoina hoe manokana packsaddle.
Charros misolo tena ny fizotry ny fahafatesana
Ny charrería dia miray amin'ny fomban-drazana Meksikana ka isaky ny 14 septambra mankalaza ny Fetin'ny Charro. Manerana ny faritaniny (raha te-hamaky lahatsoratra iray ianao Veracruz, click here) fampisehoana equestrian sy mozika natao ho fahatsiarovana azy. Mikasika ny farany, ny mariachi izy ireo no tena mahery setra.
Mikasika ny fanjakan'i Jalisco, izay resahantsika, amin'izany daty izany i Guadalajara dia mankalaza ny Fivoriana iraisam-pirenen'i Mariachi sy Charrería. Araka ny azonao an-tsaina, voaravaka voaravaka ny araben'ny renivohitra ary lehilahy sy vehivavy an'arivony maro no mandehandeha mamaky azy ireo manao akanjo Jalisco mahazatra sy mandika mozika nentim-paharazana.
Ireo hetsika dia mifantoka indrindra ao amin'ny Kianja fanafahana, izay misy fety maro. Fa misy ihany koa ny matso, fampisehoana gala ao amin'ny Teatra notetezin'ny tenda ary na ny besinimaro hiraina ao amin'ny Basilica an'ny Zapopán.
Ny vondrona Folk dia manao gadona mozika toa ny Syrup Tapatio, fantatra ihany koa amin'ny hoe "satroka meksikana" satria tavela tamin'ny tany io ary nandihy manodidina azy. Dihy fampakaram-bady izay tsy maintsy tadiavintsika ny Revolisiona Meksikana.
Malaza be koa amin'ity karazana fankalazana ity ny Culebra, dihy mamorona asa any an-tsaha, ny Iguana ary ny Soavaly mihozongozona, ankoatry ny dihy hafa ataon'ny mpandika teny mandritra ny fihainoana ny Feo mariachi. Io no anaran'ireo hira izay miaraka amin'ny dihy sy seho an'ny charrería ary, noho izany, dia mifamatotra akaiky amin'ny akanjo fanaon'ny Jalisco.
Ho famaranana, dia efa nilaza taminareo izany izahay akanjo mahazatra an'ny Jalisco ho an'ny lahy sy ny vavy. Fa izahay koa dia nanazava taminao ny maha-zava-dehibe ny tontolon'ny charrería any Mexico, izay misy an'io akanjo io ary koa ny feon'ny mariachi. Izany rehetra izany dia nametraka kolontsaina niampita ny faritry ny firenena Aztec mba ho lasa malaza manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » México » Akanjo Jalisco mahazatra